Yini iTurpial 2.0 isilethela yona + Ukufaka inguqulo yokuthuthukisa | Kusuka kuLinux
Yini iTurpial 2.0 isilethela yona + Ukufaka inguqulo yokuthuthukisa
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones, I-GNU / Linux, Izaziso, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Okwethu microblog Bengihlala ngisebenzisa I-Turpial, iklayenti le- Kuyafana y Twitter kubhalwe nge- Python futhi yathuthukiselwa ikakhulukazi i- I-Canaima.
En Ukuhlolwa kwe-Debian njengamanje i- Inguqulo ye-1.6.7 yalolu hlelo lokusebenza olulula, kepha abathuthukisi balo sebesinikeze ukubuka kuqala kwalokho esizobona kukho I-Turpial 2.0.
Njengoba sikwazi ukubona kusikrini-skrini, I-Turpial 2.0 ithole ukuphakanyiswa okukhulu kobuso futhi manje sesingasebenzisa i-akhawunti yethu Kuyafana o Twitter ngasikhathi sinye. Isakhiwo sesicocekile futhi izinkinobho zesenzo ezansi sezishintshiwe.
Ku-wiki I-Turpial Basishiyela izinyathelo ezilandelayo zokufaka inguqulo yokuthuthuka, enganconyelwe izindawo zokukhiqiza. Izinyathelo yilezi ezilandelayo:
1 1.- Faka libturpial
2 1.2- Buyekeza ubuningi
3 2.- Olubala
4 2.1- Ukufaka i-Turpial
5 2.2- Buyekeza i-Turpial
6 3.- Kulungile, sesivele siyifakile iTypial.Futhi manje?
1.- Faka libturpial
Ngalokhu sivula ukuphela (kufanele sifakwe i-git-core) sabeka:
Lokhu kuzodala ifolda i-libturpial. Ngemuva kwalokho siyifinyelela:
Ekugcineni siyafaka i-libturpial kumodi yokuthuthuka ngokuthayipha njengezimpande (noma usebenzisa iSudo):
Endabeni yami akuzange kungisebenzele. Bekufanele ngibeke okulandelayo:
1.2- Buyekeza ubuningi
Lapho kunezinguquko, singabuyekeza ngomyalo:
Futhi faka imodyuli nge:
Uma sesifakile i-libturpial singafaka I-Turpial.
2.1- Ukufaka i-Turpial
Sivula ukuphela bese sibeka:
Uma sesiqedile sifaka ifolda eyakhiwe
Ukushintshela egatsheni lentuthuko sibeka:
Ekugcineni, sifaka I-Turpial kumodi yokuthuthukisa ubeka njengempande (noma usebenzisa iSudo):
Angikwazanga ukuhlola le ngxenye ngenxa yezinkinga ngokuxhuma kwami ​​🙁
2.2- Buyekeza i-Turpial
Uma kunezinguquko ezitholakalayo singabuyekeza ngomyalo:
Futhi faka kabusha nge:
3.- Kulungile, sesivele siyifakile iTypial.Futhi manje?
Ukwenza I-Turpial sibeka ukuphela:
Uma kukhona okwaziyo ukukwenza, ngazise. Ntambama ngizama 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Yini iTurpial 2.0 isilethela yona + Ukufaka inguqulo yokuthuthukisa
Hawu, ngingavele ngithule esikhundleni se-gwibber ngifaka u-turpial, impela kuze kube yilapho izinza;). Siyabonga ngenothi.
Yebo, bengingazi i-turpial futhi ngithatha ithuba ukuyifaka ku-Mint angikaze ngizwane ne-gwibber.
Emizuzwini embalwa edlule ngisanda kufaka i-Turpial 1.6.7-1 ku-Debian Squeeze yami futhi awazi ukuthi ungijabule kanjani ukubona ukuthi i-2.0 izoba yini 😀
Kudala ngisebenzisa iTurpial. Hhayi kangako ngokuthembeka ezweni, kepha ngoba ngithanda i-xD (ngivivinye uCunaguaro noGuácharo, amakhophi weFirefox neThunderbird ._.). Ngiyayithanda indlela i-2.0 ebukeka ngayo, ngiyilangazelele.
kuhle ukuthi ukuthuthukiswa kwe-turpial kuqhubeke kahle kakhulu
UCarlos Guerrero kusho
Kukhona IPHUTHA esinyathelweni 2.2 - Vuselela iTurpial
Akuyona i- git pull Origin master Kodwa:
ukuthuthukiswa kwe-git pull Origin
Phendula uCarlos Guerrero
Ngendlela, bangenza futhi:
i-turpial -i qt
Ukusebenza ngemitapo yolwazi ye-QT esikhundleni se-GTK.
Futhi uma ufuna ukukuzama ku-MacOSX, nakhu okuzokwenzeka:
WTF !!! I-Turpial kepha ine-Qt esikhundleni se-GTK ... O_O ... isiphi isilingo 😀
Ngiyabonga, hehe ... izinga Usuke wayilanda i-2.0 kwa-Turpial? (i-alpha noma i-beta okungenani?), Ngifuna ukuyizama hehe.
Ngiyabonga kakhulu ngethiphu engiyenzayo 🙂
Ngizamile ukufaka eGroezy nge-KDE4 futhi ayivumeli ... nginenguqulo yangaphambilini yeTurpial ...
Ubumbano 5.0 luyatholakala ku-Ubuntu 12.04
Okubi kakhulu kwi-hard drive yethu